Tsy diso anjara amin’izany ny orinasam-pifandraisana Airtel, izay manome ny tolotra Airtel’Milay hahafahan’ny rehetra mifaly miaraka amin’ny namany sy ny fianakaviany ao anatin’ny serasera. Tena miavaka izy ity, raha ny tafa nokarakarain’izy ireo ho an’ny mpanao gazety. Lasa avo roa heny mantsy ny fahana hampidirina ao anaty finday, ho an’ny mpanjifa iray. Raha mampidirina 2.000 Ar ianao dia maharitra roa andro ny fahana, afaka miantso tsy an-kiato mandritra ny 200 minitra. Misy ihany koa ny tolotra ho an’ny fahana 500 Ar sy ny 1.000 Ar maharitra mandritra 24 ora, miankina amin’ny fahafahan’ny tsirairay. Tanjona araka ny nambaran’Atoa Eddy Kapuku, tale jeneralin’ny orinasam-pifandraisana Airtel ny hanampiana ny mpanjifa tsy an-kanavaka, tsy hampihenana ny vidin’ny fahana akory fa ny mba hahafahana mampibontsina izany mba hifanaraka amin’ny filàn’ny mpianjifa tsirairay avy.